“2019 waa sanadkii ay kooxda Tottenham ku guuleysan lahayd koobab” – Pochettino – Gool FM
“2019 waa sanadkii ay kooxda Tottenham ku guuleysan lahayd koobab” – Pochettino
(Tottenham) 24 Dis 2018. Macalinka reer Argantina Mauricio Pochettino ayaa ugu baaqay taageerayaasha Tottenham Hotspur in lagu sii dhawaanayo xiliga ay Spurs-ka ku guuleysan lahayd koobab.
Mauricio Pochettino ayaa dhinaca kale sheegay in arintan ay si weyn kaga saacidi doonto garoonka cusub ay yeelan doonto kooxda Tottenham Hotspur.
Garoonka cusub ay yeelan doonto kooxda Tottenham Hotspur ayaa waxaa shaqadiisa faraha laga qaadi doonaa sanadka cusub ee 2019, waxaana la filayaa in kulankooda ugu dambeeya ay ku ciyaari doonaan garoonka Wembley uu noqon doono kan ay kula ciyaari doonaan Manchester United bisha janaayo ee soo aadan
Tottenham Hotspur ayaa 6-2 gool kaga adkaatay Everton habeenkii axada, taasoo ka dhigeysa inay ku soo dhawaanayaan kooxaha hogaaminaya horyaalka Premier League.
Spurs-ka ayaa fadhida booska 3-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, kadib markii ay soo heshay 42 dhibcood, halka Man City ay heysato 44 dhibcood, hogaamiyaasha Premier League ee Liverpool ayaa dhankooda heysta 48 dhibcood.
Hadaba Mauricio Pochettino ayaa sheegay: “Tottenham Hotspur waxay diyaar u tahay inay ku tartamaan koobab waaweyn, kadib marka la dhameeyo shaqada garoonka cusub”.
“Waxaan yeelan doonaa mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee ciyaaraha isboortiga adduunka, ujeedkeena waa inaan ku guuleysano koobab, ma jiraan ilaa iyo haatan waxaan ku guuleysanay”.
“Chelsea waxay u xanuunsan tahay maskax ahaan” - Maurizio Sarri